Huya သည် Legends League Professional League တွင် ငါးနှစ် သီးသန့် ထုတ်လွှင့် ခွင့် ကိုရရှိ ခဲ့သည် – Pandaily
Jan 10, 2022, 20:37ညနေ 2022/01/10 23:05:58 Pandaily
၂၀ ၂၂ LoL Professional League (LPL) နွေ ဦး ရာသီ ပြိုင်ပွဲ စတင် ခြင်းနှင့်အတူ Tiger Ya သည် အောင်မြင် ကြောင်း တနင်္လာနေ့တွင် တရားဝင် ကြေငြာ ခဲ့သည်LPL မှ ငါးနှစ် သီးသန့် ထုတ်လွှင့် ခွင့် ကိုရရှိ ခဲ့သည်Huya သည် ဂိမ်း မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် သည့် အစီအစဉ်များ ကိုစီစဉ် ပေးပြီး guests ည့်သည် များကိုပါ ၀ င် ရန်ဖိတ်ကြား လိမ့်မည်။
LPL Spring Split ၏ ဆောင်ပုဒ် မှာ “ Crazy Is Our Game” ဖြစ်ပြီး ပထမ ဦး ဆုံး ဂိမ်း မှာ OMG vs TT, FPX vs RNG ဖြစ်သည်။ LPL Spring Substation ပြိုင်ပွဲ သည် “ No grouping, single round-robin, BO3” စနစ် ကိုအသုံးပြု မည်ဖြစ်ပြီး မတ်လ ၂၀ ရက်အထိ ဆက်လက် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာ လက ၂၀၂၁ League of Legends World Championship တွင် တရုတ်ပြည်မကြီး (LPL) မှ EDG သည် တောင်ကိုရီးယား LCK မှ DK နှင့် ၅ ပွဲ ကစား ခဲ့ပြီး ၃: ၂ စံချိန် ဖြင့် ချန်ပီယံ ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ အဲဒီနောက် ဒီဇင်ဘာလ မှာEDG အဖွဲ့ဝင်များ သည် Tiger Tooth သို့ တရားဝင် ဝင်ရောက် ခဲ့သည်.
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် သည့် ကုမ္ပဏီ Huya မှ ၀ န်ထမ်း ဟောင်း များသည် အလုပ် အရည်အချင်း ကြောင့် အလုပ်သမား အငြင်းပွား မှု၏ ပထမအကြိမ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆုံးရှုံး ခဲ့သည်
Huya သည် မကြာသေးမီက တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် သည့် မူပိုင်ခွင့် မှ များစွာ ရရှိခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၂၁,ကျား သွား နှင့် ESLနှစ်ဖက် စလုံးက နှစ်နှစ် (၂၀ ၂၂၊ ၂၀ ၂၃) သီးသန့် တရုတ် ထုတ်လွှင့် ခွင့် အခွင့်အရေး သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့ပြီး CS: GO, Dota2နှင့် StarCraft2ခေါင်းစဉ် များပါ ၀ င်သည့် ESL စီးရီး များတွင် ထုတ်လွှင့် ခြင်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကိုဆက်လက် ပြုလုပ် သွား မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့တွင် Tiger Tooth သည် LoL 2021 အတွက် သီးသန့် ထုတ်လွှင့် ခွင့် ကိုလည်း ရရှိ ခဲ့သည်ဒီ မာ စီယာ ဖလား.
Gaming Jan 10 မတ် 22, 2022